Iyadoo bilawga xilli-ciyaareedka cusub waa wakhti ay ka fekeraan isbeddelka dharka. Caadiyan, xagaaga, dharka ugu caansan dharka waa dharka. Waxay faa'iido u tahay balanqaadka, iyo socodka maalmaha kulul, waxaad dooran kartaa dhar xafiis ama xaflad dalxiis. Dharka quruxda leh ee sanadkaan waxaa lagu kala duwan yahay kala duwanaansho ballaaran oo ballaaran oo kala duwan oo kala duwan. Waxay u egtahay in ay doorto midka saxda ah.
Dharka quruxda leh ee sanadkan ayaa leh qaab kale. Marka hore, isbeddelka xilli-ciyaareedka waa dhar dhaadheer oo dheer. Haddii horay aadan u dhicin inaad dharka soo dejisid dhulka, ka dibna xagaagan waa waqtigii lagu ogaan lahaa riyadaada. Laakiin dharka qaaliga ah ee dharka madow marnaba ka baxo moodada, sidaas daraadeed qaybaha yaryar ee dharka moodada ah waa inay ahaadaan dharbaaxo kasta ee fashionista.
Marka labaad, moodalku waa mid adag. Sidaa daraadeed, dooro dharka qaab-dhaqameedka ilma-doolar ama ilaahyada Giriigga.
Seddexaad, marwalba ciriiriga ayaa waligood aad muhiim u ah. Neefsashada, qarxinta iyo cirifka - dhammaantood waxay ku jiri karaan dharka dharkaaga.
Ha iloobin qaabka qulqulka. Dharka - qorraxda, dharka - marinka, dharka - lalabada iyo dharka - kiis - moodooyinkan waxay ku haboon yihiin munaasabad kasta oo nolosha ah. Iyadoo ku xiran sifooyinka sawirkaaga, waxaad si sahlan u dooran kartaa qaabka dharka. Ha iloobin dharka asmmaatiga ah. In kasta oo laga jaray qayaxan aan caadi ahayn, waxay noqon karaan kuwo ku habboon xafiiska iyo xaflad.
Dharka qurxinta xagaaga waxaa lagu gartaa naqshadaha ugu badan. Haddii aad u maleyneyso inaadan waxba haynin, in wanaaggaagu hoosta la dhigo, ka dibna doorta dhar xidhka garbaha furan ama hoos u dhigga hoose.
Sannadkan waa midabyo dhalaalaya oo aad u qurxoon. Sidaa daraadeed, waxaa habboon in dareenka la saaro ma aha oo keliya midab madow iyo caddaan ah, laakiin sidoo kale midab casaan, jaalle, casaan iyo cagaar marka la dooranayo dharka.
Intaa waxaa dheer, dharka moodada xilligan xaadirka ah waa in ay ahaataa mid leh qaab muuqaal leh - ubaxyo waaweyn, jinsi qowmiyadeed, qaababka joomatari, daabacado aan caadi ahayn.
Ha iloobin isku dhafka midabada kala duwan, ma aha oo keliya muraayadaha madow iyo caddaanka ah, laakiin sidoo kale dhalaalaya - casaan iyo buluug, casaan iyo cagaar.
Xiliga Xilliga Xilliga Xagaaga waa inuusan aheyn mid qurux badan, laakiin sidoo kale raaxo leh, markaa markaad dooraneysid diyaargarow cusub, fiiro dheeraad ah waa in la siiyaa dharka. Xilliga cimilada qaboobaha ee dhogorta leh, maalmaha kulul - dharka xariir, satin, xayawaan.
Dad badan ayaa iska indha-tiraya xaashiyaha caadiga ah, sida kalluunka iyo suufka. Dharka kore ee dharka ayaa u eegi kara fudud, laakiin dharka dabiiciga ah wuxuu kuu ogolaanayaa inaad dareento inaad ku fiicantahay kuleylka ugu xoogan, marka lagu daro, dharka laga soo gooyo dabiiciga dabiiciga ah looma diidi karo. Dharka fudud ee fudud ayaa lagu qurxin karaa nooc aan caadi ahayn ee dharka ama qurxinta qani ku ah. Xirfadahani waxay u fiicanyihiin socodka, iyo xafiis, laakiin waxaad ka heli kartaa ikhtiyaarka xaflad dhiska.
Waxyaabaha kale, dharka moodada xagaaga ee xagaaga waa inay ahaato raaxo leh qurxiyo. Ha ilaawin qalabka wax lagu duubo - suumanka, suumanka, boogaha iyo stoles kuwaas oo noqon kara waxyaabo cajiib ah oo aad u sameysid. Moodada, daabacaadda, qalabka wax lagu duubo, kuwa waaweyn, rinjiga, qurxinta alaabta qurxinta leh ee laga sameeyay alaabta dabiiciga ah, xitaa dhaldhalaalka iyo birta waxay heli karaan meel dharka xagaaga.
Xilliga ugu muhiimsan ee casriga casriga ah waa awooda tijaabinta, la ciyaara midab iyo qaab, adigu dooro naftaada qaab shakhsi ahaaneed. Xilligaas ma jiraan xeerar adag, taas oo micnaheedu yahay in gabadh kasta ay istaagi karto, xulashada farshaxan ee sawir iyo dhadhan. Waxaad u baahan tahay inaad ku darto maskaxda oo aadan ka baqin mid cusub.
Shiaparelli ayaa go'aamisay magacaabidda agaasime cusub oo hal abuur leh
Jordan Dunn wuxuu noqday naqshadeynta dharka carruurta
Xaalad sarre loogu talagalay dadka: ururinta cusub ee Balmain ee H & M
Week Week Fashion ee St. Petersburg
Dheecaan ba'an inta lagu jiro uurka
Maydhista iyo isticmaalka
Jacaylkii hore ee Alla Pugachyova Sergei Chelobanov markii saddexaad wuxuu noqday aabbe
Tartee kiriimka qumbaha
Sida loo doorto oo loo beero geedo geedo midho leh?
Waa maxay sababta riyada iyo bisadaha. Fasiraadda caanka ah ee ugu caansan
Safarka Europe ee October
Sidee loo saxaa jimicsiga oo dib u dhiga xitaa?
Mackerel lagu dubay foornada
Waxay ahayd riyo ah in aqalkaaga uu dhacay. Interpretations Popular
Sida ugu dhakhsaha badan ee looga saaro daal iyo si dhakhso ah u helaan xoog
Pocket Muse oo soo laabtay tattoo
Shashlik degdeg ah
Doorka dareenka jirka ee nolosha dadka
Tatyana Navka ayaa shaqada ku soo noqotay halkii ay ka ahayd malab